Dab ka kacay diyaarad Rakaab oo Maraykanku leeyahay
Home WARARKA Dab ka kacay diyaarad Rakaab oo Maraykanku leeyahay
Chicago:(Berberanews)-Diyaarad nooca rakaabka qaado ah oo ay leedahay Shirkada Diyaaradaha ee American Airlines ayaa dab qabsaday xili ay ka duuleysay garoonka diyaaradaha O’Hare Airport ee magaalada Chicago .
Diyaaradan oo nooceedu ahaa American Airlines Flight 383 ayaa siday rakaab gaadhaya 161, waxaayna diyaaradu kusii jeeday magaalada Miami gobolka Florida ee dalka Mareykanka.
Ma jiraan qasaare ka dhashay dabka ka kacay diyaaradan marka laga reebo dhowr qof oo naqasku uu ku dhagay , waxaana dadkaasi naqasku uu ku dhagay la dhigay isbitaalo xaaladooda caafimaad lagu daweenayo.
Rakaabkii diyaarada saarnaa ayaa farxad badan dareemay kadib markii ay ka bad baadeen shilkan ,waxa ayna isugu hambalyeeyeen in ay yihiin dad nasiib badan, waxaana hada socda baadhitaano lagu ogaanayo cilada diyaarada.
Previous articleSomalia: The Forgotten Story – Al Jazeera World
Next articleXog ku saabsan farqiga da’da ee u dhexeeya lammaanaha iyo waxay ka aaminsantahay caado-somaligu